Kitty Guesthouse , Koh Phi Phi (Igumbi Eliphezulu)
ตำบล อ่าวนาง, กระบี่, i-Thailand
Ikamelo e-ihostela ibungazwe ngu-Porntip
Ivulwa ngo-2013, iKitty Guesthouse yamukele abahambi abavela emhlabeni wonke ukuya endaweni eshisayo yesiqhingi sase-Koh Phi Phi kusukela ngaleso sikhathi. Indlu yethu Yezivakashi ekhululekile futhi enobungane, eyavuselelwa ngo-2017, inezindlu zokulala ezingu-20 ezintsha nahlanzekile ze-en-suite zonke ezihlome ngokuphelele nge-wifi yesivinini esiphezulu ne-cable TV.
Kutholwe amaminithi angu-2 ukusuka ebhishi lase-Loh Dalum nemizuzu engu-12 ukusuka endaweni yokugibela abagibeli e-Phi Phi, sinikeza abahambi bayo yonke iminyaka nezintshisakalo isisekelo esikahle nesinethezekile sokuhlola i-Koh Phi Phi.
Ukuze sisize izivakashi zijabulele isikhathi sazo esiqhingini, sihlinzeka ngehhovisi Lokuvakasha elisebenza ngokugcwele elinikeza i-scuba diving, i-snorkeling, i-kayaking, i-trekking kanye nohambo olunqamula i-Thailand.
4.71 ·7 okushiwo abanye
Njengoba sesihlale esiqhingini sase-Koh Phi Phi iminyaka ehlanganisiwe engu-25, ababungazi bethu banolwazi olujulile nokwazisa ngezimangaliso zemvelo zale ndawo ekhethekile. Sihlala sikujabulele ukwabelana ngothando lwethu ngobuhle obuyingqayizivele besiqhingi futhi sihlose ukunikeza izivakashi zethu ulwazi 'lwangaphakathi' eziludingayo ukuze zihlole i-Koh Phi Phi ngendlela engcono kakhulu engakhona.
Ukwamukela e-Guesthouse kuvulwa phakathi kuka-8am - 8pm.
Njengoba sesihlale esiqhingini sase-Koh Phi Phi iminyaka ehlanganisiwe engu-25, ababungazi bethu banolwazi olujulile nokwazisa ngezimangaliso zemvelo zale ndawo ekhethekile. Sihlal…
UPorntip Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- ตำบล อ่าวนาง namaphethelo